Sharraxaadda Madaarka Hava-Sen ee Istanbul | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSharraxa Hava-Sen ee ka soo degtay Garoonka Diyaaradaha Istanbul
12 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Hawada aad kaheshay sharraxaada garoonka diyaaradaha ee istanbul
Xaaladaha xun ee shaqo ee shaqaalaha TGS ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa sii socda. Ururka Shaqaalaha Shirkadda Diyaaradda (Hava-Sen) wuxuu caddeeyey inay tahay inay ka fikiraan shaqaalaha inkasta oo aysan ahayn urur shaqaale oo idman ayna liis gareeyeen qodobo dhowr ah oo la xiriira xaaladahan shaqo.
Xaaladihii shaqo ee tabanaa ee shaqaalaha kooxdii turkiga (TGS) ee gegida dayuuradaha Istanbul ayaa sii socda. Masaafo ahaan garoonka diyaaradaha illaa dejinta, waqtiga gaadiid ku qaadashada iyo dhererka saacadaha adeegga ayaa shaqaaluhu aysan ku faraxsaneyn, laakiin waxaa jiray bayaan la taaban karo oo ku saabsan mowduuca.
Uz Waxaan ugu yeeraynaa maamulayaashooda inay ka fikiraan qiyamka aadanaha iyo sharciga, U dir ururka midowga yuu yiri war qoraal ah.
Sharaxa ay bixisay Hava-Sen waa sida soo socota:
Shaqaalaha Sivil Sharafta leh ee Duulista Rayidka ah,
Waxaan kormeer ku sameynay hirgalinta 26.TİS, oo aad aad u taqaanid diyaarintiisa iyo geedi socodkiisa ansixinta, ka dib markii la saxiixay, in kasta oo ay liidato iyo khaladaadkeeda oo dhan. TİS waa dukumintiga ugu muhiimsan ee dhowraya xuquuqda iyo danaha shaqaalaha. Codsigu waa muhiim. Laguma baddali karo qawaaniin isku mid ah ama qarsoodi ah. 26. Kama qeyb qaadanin TIS ka dibna waxaan baarnay xaaladda arrimaha ay ku xakameyn doonaan borotokoolka. Waxaan rabnay inaan kula wadaagno natiijooyinka si aan u baranno xaqiiqda.
1. 26, in kasta oo ay jiraan dhammaan digniinahayagu, waa xalka caqabadaha u guuritaanka Meesha Cusub. Wax lug ah kuma lahayn TIS. Hadda waxaan aragnay in nasiibdarro aan saxney. Weli waxaa jira dhibaatooyin waaweyn oo xagga shaqeynta iyo dibadaba ah. Adeegyada uma fududaan karaan shaqaalaha iyo kuwa u shaqeeya sidii ay iyagu iskood ula shaqeeyaan waxay la kulmaan dhibaatooyin waaweyn. 9 waxay qaadataa saacad saacado dheeraad ah. Shaqaaluhu waa inay is daryeelaan. Wadayaasha adeega waa mushkilad gooni ah. Ma saadaalin karno inta saaxiibo ee aan ku waayi doonno wadada shaqada, inta saaxiibbo ah oo shil ku dhici doona. 13-4 jeer ayaa kordhay masaafooyinka socodka maalinlaha ah ee shaqaalaha dhulka ka shaqeeya aagga weyn ee garoonka. dhibaatooyinka shaqaalaha iyo suuliga shaqaalaha iyo duulimaadyada shaqaalaha duulimaadyada ee u dhexeeya qolalka kooxda, aagga marinka, albaabada iyo iridaha laga baxo iyo diyaaradda si fiican looma xallin karin.
2. Mid ka mid ah arrimaha loo ballanqaaday ee lagu xallin doono 26.TİS waa 95 oo ay ku jiraan qawaaniinta görev ee waajibaadka iyo nasashada xubnaha kooxda .. Ururka awooda u leh kama bixi karin wax ka badan hadaladii kuris ee aan dhisnay gudi, waanu ka shaqeynayna taas. Sida HAVA-SEN, waxaan sii wadnaa aqoon isweydaarsiga billaha ah ee SHT-FTL Arrimo muhiim ah oo u baahan in laga abaabulo ka shaqeynta iyo nasiinta kooxaha isbeddelaya ayaa durba muuqda. 95 waxtarka shaqaalaha iyadoo la tilmaamayo faa iidooyinka iyo khasaaraha SHT-FTL. ururka awoodda u leh ma sameeyo dadaallada lagama maarmaanka u ah asaasidda qodobbada qodobka. Mid ka mid ah xuquuqaheena aasaasiga ah, sida N 03 waqtiga maxalliga ah: 00 iyo xiritaanka shaqada kadib isla maalintaas "," lama bixin karo maalmo guriga ka baxsan "iyo markale, isla markiiba lama bilaabi karo kadib dhamaadka maalmaha bilaashka ah ee isku xiga (00: 00 maxalliga ah) önemli xuquuqdeena 26. muddada Tis'de laguma darin. Luminta xuquuqda sidan oo kale ahi waxay gabi ahaanba ka soo horjeedaa ruuxa midowga ganacsiga. Ururka midowgu waa inuusan lumin, waa inuu guuleysto. Waxaan ku baaqeynaa in dib loo soo cesho xuquuqaha laga qaaday kooxaha duulista iyadoo loo marayo hab maamuus loo soo saaro iyada oo aan la daahin.
3. Bil kasta, shaqaalaha xNUMX-500 shaqaalaha ah waxaa laga qaadaa duulimaadka iyadoo la raacayo magaca tababbarada takhasuska leh waxayna shirkaddu magdhow siisaa shirkadda magdhowga duulimaadka aan la siinin. Laakiin isla muddadaas, 700 ayaa lagu dhawaaqay qorista shaqaalaha kabitaanka. Xaaladdaas, oo umuuqata mid khilaafsan, waxay muujineysaa in ujeedadu tahay in sida ugu dhakhsaha badan looga saaro shaqaalaha khibradda leh, si loogu beddelo shaqaalaha A700, si loo yareeyo kharashaadka mushaharka. Maaddaama shirkaddu aysan lahayn nidaam meelayn ku saleysan, ma fahmin in duulista lagu qoray dhiig. Ma ay yaqaaniin micnaha ay u kala sarreeyaan iyo waaya aragnimadooda. Ururka shaqaalaha ayaa haysta saxan. Xaqiiqdii, liiska saxeexyada kabin ee ay diyaariyeen iskudaydu maahan sababo macquul ah, laakiin waa urta nacaybka iyo isjiid jiidka.
4. Shirkadda ayaa joojisay iibsigii duuliyaha. Dabcan, majirto wax 24 MAX u duulayaan, laakiin waxaa loo arkaa in 2020 uu duuli doono bilaha ugu horreeya. Tababarku waqti ayuu qaadanayaa. Laakiin sidaan hore u aragnay, diyaaraduhu waxay u horreeyaan ka dibna kooxo ayaa loo dejiyaa. Markii aan ku filnayn, waxaa la qaadayaa tijaabo dibadeed. Shirkadaha sida Thomas Cook, Jet Airways, Germania, waxay ku fadhiisteen duulimaadyada rayidka adduunka. Ryan Air ayaa gariiraya. Marka waxaa jira lacag fara badan oo duuliyayaal shisheeye ah oo suuqa la geeyo. Way fududahay in la xiro farqiga. Laakiin fursad siinta da 'yarta da' yarta ee Turkiga waxay fursad u tahay xal macquul ah oo waara. Ugu yaraan duuliyeyaasha soo gaadhay marxaladda u qalmidda iyo qandaraas-siinta ayaa ahayd in la siiyo fursad.
Arrin kale ayaa ah in ay xanuun badan tahay in bixinta lacagaha ka qalin-jabiyay Akadeemiyada aan loo soo qaadin ajendaha in kasta oo ballan-qaadyada iyo shaqooyinka badan la qabtay. Si looga faa'iidaysto dhiigmiiradku way socotaa mana jiraan cod ka soo baxay ururka ganacsiga oo karti u leh.
5. Sida dib loogu soo celin doono war-saxaafadeedka aan ku sameynay 29 May 2019, qiimaha guuritaanka, caqabadaha muraayadda cusub, yareynta rakaabka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay horumarka ka soo baxay isku-imaatinka, sidii hore, waxaan ku tuuraynaa awoodda 1500 ama waxaan qaadi doonnaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah yareynta mushaarka. Tan, ururka sharciyeysan ayaa hoos u dhigay socodka, isaga oo dhahay shaqaaluhu way oggolaadeen taas oo ka dhalatay codbixinta dadweynaha ee beenta ah. Hadda waxaan u nimid isla qodobkaas. Wakiilka midowga ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan arintan. Waligeen lacag kuma lug lihin. Waxaan u maleynay in qiimaha lagu daray ee la abuuray abaal marin la siin doono. Si kastaba ha noqotee, ururka shaqaalaha waxaa loo yaqaan 'rootiga', waxaan uga digayaa loo shaqeeyaha inuusan u dhicin isla habkaas oo uu u muuqdo mid quruxsan mar labaad. Durba dareenka daciifnimada lahaanshaha iyo aaminaada ayaa gabi ahaanba lumay. Soo laabashada shirkadeena waxay noqon doontaa mid faa iido ah maahan khasaare. Qaabka loo yareeyo kharashaadka maahan in lagu ekaado mushaaraadka shaqaalaha. Ururka midowga wuxuu u jiraa in laga hortago qaladaadadan, ma aha aalad loo adeegsado dhaqamada dhaawaca shaqaalaha.
6. Saaxiibbada TGS waxay leeyihiin waxay ku jiraan cadaadis badan iyo daal badan. Wax su’aal ah kama qabno qaab dhismeedka TGS, maamulka iyo siyaasadaha dhaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, shaqadoodu waa mid aad u muhiim ah oo qiimo u leh THY. Si kastaba ha noqotee, in ka badan boqol shaqaale ayaa bil kasta la dhigaa kuwa kalena waa lagu qasbaa inay dhammaantood noocyo xun xun ula dhaqmaan kibista darteed. Shuruucda sharciyada nasiibdarro way laalaadayaan, waxay raadinayaan xuquuqda ah inay u aado cid kasta oo doonaysa, laakiin waxaa loo yaqaan '' albaabka ka baxsan ''. Tayada adeegga lagu bixiyo xaaladahaan waa in wax laga weydiiyaa. Annaga ahaan, nabadgelyada iyo amniga duullimaadyada waxaa lagu xaqiijin karaa tabarruca tooska ah ee qof walba. Mid ka mid ah lakabyada aragtida 'Swiss Chese' waa TGS. Waxaan ku casuumeynaa maamuleyaashooda inay tixgeliyaan qiimaha aadanaha iyo sharciga.
Shaqaalaha qaaliga ah, in kastoo aannaan ahayn urur idman, waxaan sii wadaynaa inaanu kaa caawino joogitaankayaga. Waajibkeenu waa inaanu horkeenno xaqiiqooyinka hortaada ah. Waxaan sii wadi doonnaa intii karaankeena ah inaan ilaalino xuquuqdaada iyo sharcigaaga. Horumarka la xiriira baaskiillada mustaqbalka wuxuu kordhin doonaa muhiimadeena iyo qiimeheena. Marka waxaan kaa filaynaa inaad ku jirto midowga kugu habboon.
Gaadiidka ka socda Memur-Sen ee garoonka diyaaradaha Antalya…
102 TL xawilaad laga bilaabo Haksen ilaa Memur-Sen
DEGUVDER wuxuu booqday Gaadiidka Turkiga
Maareeyaha Guud ee TCDD ee Sarkaalka Gaadiidka-Sen…
Laga soo bilaabo Sarkaalka Gaadiidka-Sen ilaa Maareeyaha Guud ee TCDD Uygun '
Gaadiidka Ka TCDD Taşımacılık A.Ş. General ...